मुख्यमन्त्री शाक्यले अघि सारिन् यस्तो प्रस्ताव, काठमाडौंमा घरजग्गा भएकाहरु तनावमा ! – GALAXY
मुख्यमन्त्री शाक्यले अघि सारिन् यस्तो प्रस्ताव, काठमाडौंमा घरजग्गा भएकाहरु तनावमा !
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले अघि सारेको प्रस्तावले काठमाडौँबासीहरुलाई झस्काएको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले देशको संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सार्न प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
उनले चितवन र मकवानपुरलाई जोडेर देशको संघीय राजधानी बनाउनुपर्ने बताएकी हुन्। उनको प्रस्तावपछि काठमाडौँबासी आक्रोशित बनेका छन् । शाक्यले प्रस्ताव गरेपनि संघीय राजधानी सार्न प्रायः असम्भव छ ।
मंगलबार भरतपुरमा आयोजित जिल्ला समन्वय समिति चितवनको पाँचौँ जिल्ला सभाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिएको चितवन र मकवानपुर जोडेर देशको राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने बताएकी हुन् ।
हालको राजधानी काठमाडौं पुग्न सबैलाई कठिन पर्ने भएकाले काठमाडौंलाई प्रदेशको राजधानी बनाएर सबैलाई पायक पर्ने चितवन र मकवानपुरलाई देशको राजधानी बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् ।
यस्तै यता एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेकी शाक्यको मुख्यमन्त्री पदको भविश्यलाई लिएर विभिन्न अनुमान गरिएको छ । नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहको अवस्थामा तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले राजिनामा दिएर मूख्यमन्त्री बनेकी शाक्यको पद कति दिन टिक्ला त ? के उनले सहज रुपमा बहुमत पुर्याउँन सक्छिन् तरु सकिनन् भने सहज पद हस्तारण गर्लिन त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाक्य स्पष्ट अल्पमतमा परेकी छिन् । संसद बाट विश्वासको मत लिन नसकेकोमा एक मिनेट पनी कुर्सीमा नबस्ने भन्दै उनले जति दिन पदमा बसिन्छ त्यसको एक एक मिनेट हिसाब गरेर जनताको पक्षमा काम गरिरहेको यस अघि नै बताइसकेकी छिन् ।
कुल १०९ जना सांसद रहेको बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा मध्ये ५५ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । मुख्यमन्त्री शाक्यको दल एमाले ४३ सांसदमा सीमित भएको र काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत जुटेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुने निश्चित देखिन्छ ।
प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २३, नेपाली काँग्रेससँग २२ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १३ गरी जम्मा ५८ सांसद हुन्छन्, जो प्रदेशसभाको प्रस्ट बहुमत हो ।
यी तीन दलसहितको गठबन्धन केन्द्रमै बनिसकेको छ । त्यसैले बागमती प्रदेशमा यी तीन दल मिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाक्यले साना दलहरूको साथ लिए पनि बहुमत नजुट्ने निश्चित छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभाको अंकगणित आफ्नो अनुकुल नरहेको यो अवस्थामा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हुने विपक्षी गठबन्धनको तर्क छ ।